Manuel Locatelli oo ku biiraya Kooxda Juventus. - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Manuel Locatelli oo ku biiraya Kooxda Juventus.
Manuel Locatelli oo ku biiraya Kooxda Juventus.
Xiddiga kooxda Sassuolo ayaa soo jiitay indhaha kooxaha ugu sareeya horyaalada Yurub ka dib qaab ciyaareedkiisii xulkiisa taliyaaniga ee Euro 2020.
Locatelli ayaa ka mid ahaa xidigihii ku guuleysatay koobka qaramada yurub oo ay dhawaan ku guulaysteen xulkiisa Balse saxiixiisa waxaa doonayaa Arsenal iyo Tottenham, laakiin kooxda Juventus ayaa ugu cadcad helitaanka Manuel Locatelli.
Manuel Locatelli ayaa yiri Xiisaha ka imanaya Juventus waa mid lagu farxo, waa koox weyn, waana waana jeclahay in aan kubiiro.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Siyaasiyiinta is khilaafsan ee Gobolada Waqooyi
Next articleDhaqaatiir ka timid Somaliland oo Transit ku ahaa Garoonka Aadan Cadde oo lagu celiyay Hargeysa